Job ? from Saturngod by saturngod | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Job ? from Saturngod by saturngod
Job ? from Saturngod by saturngod
Posted by zinmyotun on Nov 5, 2010 in Computers & Technology, Copy/Paste, How To.., Know-How, DIY, Other - Non Channelized |0comments
အလုပ်အပေါ်မှာ ခံယူချက်က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူညီနိုင်ဘူး။ အချို့တွေကလည်း ဝါသနာပါတာကို လုပ်လို့ ဆိုကြသလို အချို့တွေကလည်း အလုပ်ရနိုင်တာကို လုပ်။ ဝါသနာထက် ရေရည်ရပ်တည်နိုင်ဖို့က အရေးကြီးတယ်လို့ ဆိုကြပြန်တယ်။ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် ခံယူချက်မတူသလို ကျောင်းပြီးကာစ လူငယ်လေးတွေလည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိကြတာ အမှန်ပါ။
ငယ်ငယ်တုန်းက အမေ ခဏခဏ ပြောဘူးတယ်။ သားကို အမေတို့က ပညာအမွေပဲ ပေးနိုင်တယ်။ ပညာတတ်အောင် သင်ပေးတဲ့ အထိပဲ အမေတို့ တတ်နိုင်မယ်။ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ်ရပ်တည်ရမှာပဲလို့ ငယ်ငယ်တုန်းက အမေ ခဏခဏ ပြောခဲ့ဘူးတယ်။ ပညာ အမွေ ? အဖေ တို့ အမေ တို့ ပေးနိုင်တာကတော့ ကျောင်းပညာ အမွေပါ။ ကျောင်းပညာ လို့ ဆိုရတာကလည်း ကျောင်းမှာ သင်တဲ့ ပညာရယ် ကျောင်းမှာ မသင်တဲ့ ပညာရယ်ဆိုပြီး ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ။။ ဗေဒင် မျက်လှည့် စတာတွေက ကျောင်းမှာ မသင်ပေးနိုင်ဘူး။ ဗေဒင်နဲ့ ချမ်းသာတဲ့ ဗေဒင် ဆရာတွေ ရှိသလို ဆင်းရဲနေတဲ့ ဗေဒင်ဆရာတွေလည်း အများကြီးပါ။ မျက်လှည့်ထို့ အတူပါပဲ။ အခြေခံအဆင့် အောင်သွားရင်တော့ ရေးတတ် ဖတ်တတ်သွားမယ်။ စကားပြောတတ်သွားမယ်။ စဉ်းစားတတ်လာမယ်။ သို့ပေမယ့် နောင်တချိန် အလုပ်ရဖို့ ပိုက်ဆံတွေရှိလာဖို့ ပျော်ရွှင်လာဖို့ ပညာတွေ ပါမလာတာကတော့ သေချာတယ်။ high school ပြီးတော့ တက္ကသိုလ်တွေ တက်ကြရပြန်ကော။ တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ အခါမှာလည်း အမှတ်မှီလို့ မိဘ က သွားခိုင်းတာနဲ့ ဝါသနာ ပါတာကို စွန့်ပြီး ဆေးကျောင်းသွားရတဲ့သူတွေရှိသလို ဝါသနာပါတဲ့ လိုင်းကိုပဲ လိုက်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဝါသနာမပါပဲနဲ့ လာတက်တဲ့သူတွေ အထဲမှာ Computer တက္ကသိုလ်က လူတော်တော်များများ ပါတယ်။ Computer တက္ကသိုလ်ရောက်မှ programming ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ သိကြတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပဲဗျ။ တနည်းပြောရင် ကိုယ်တက်မယ့် တက္ကသိုလ်မှာ ဘာတွေ သင်မလဲဆိုတာ မသိတဲ့သူတွေ အများကြီးပဲ။
ဆယ်တန်းပြီးတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ဘာဝါသနာပါလဲလို့ မေးလိုက်ရင် အင်း.. အဲ… ဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်။ မဟုတ်ရင် ငယ်ငယ်ကတည်းက သင်ပေးထားတဲ့ အတိုင်း ပြောတာတွေလည်း အများကြီးပါ။ ဝါသနာဆိုတာက ပြောင်းလဲတတ်တယ်။ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဝါသနာ ပြောင်းသွားတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် အခုအချိန်မှာ ဘာဝါသနာပါလဲဆိုတာကိုပဲ မေးလို့ရလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်။ တနည်းပြောရင် ငယ်ငယ်တုန်းက စစ်တိုက်တန်း ကစားရတာ ဝါသနာပါပေမယ့် ကြီးလာတဲ့အခါမှာ စစ်တိုက်နေရတာ မကောင်းဘူးလို့ နားလည်ရင် ဝါသနာ ပါတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဝါသနာ ဟာပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုအချိန်မှာ ဘာဝါသနာပါလဲလို့ မေးရင် ဖြေနိုင်ဖို့လိုတယ်။ ဆရာဝန်လုပ်ချင်တယ်။ ဆရာဝန်လုပ်ရတာ ဝါသနာပါတယ် လို့ ဆိုတဲ့သူတွေဟာလည်း အမှတ်မမှီတဲ့အခါမှာ သူတို့ ဘဝကြီး အလကားဖြစ်သလို ခံစားသွားရတဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ။ ၁ဝ တန်းမှာ ဆေးကျောင်းအမှတ်မမှီလို့ စိတ်ပျက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အခြားနေရာတွေမှာလည်း အောင်မြင်တယ်။ တော်တယ်ဆိုတာ တော်တော်ရှားသွားတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဝါသနာ ပျက်စီးသွားပြီ။ သူတို့ ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီး မသိစိတ်က ရှေ့ဆက်မယ့် ဘဝတွေကို ထိန်းချုပ်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့သူတွေကို ကျောင်းတက်နေတုန်းက တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။
အားရင်တော့3Idoits ဆိုတဲ့ India ရုပ်ရှင်ကားလေး ကြည့်သင့်တယ်။3Idoits မှာ အဓိက အချက် ၃ ချက်ကို ပြသွားတယ်။
၂. ကိုယ်ဝါသနာပါတာကို မိဘနဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
၃. ကျောင်းတက်ခြင်းဟာ ဘွဲ့ရဖို့အတွက် အလုပ်ရဖို့အတွက် မဟုတ်ဘူး။
အဲဒီ အချက် ၃ ချက်ကိုပဲ ပြသွားတာပါ။
အလုပ်ရဖို့ကတော့ ပညာလိုတယ်။ အခုခေတ်ကလည်း ပညာတတ်ဖို့ ရွှေအိုးလိုတယ် ဆိုပြီး ဖြစ်နေပြီ။ ဝါသနာ ပါတာလုပ်တိုင်းလည်း ဝမ်းဝမှာ မဟုတ်တဲ့ ဝါသနာတွေလည်း ရှိပြန်ကော။ ဥပမာ။။ ဝါသနာ ပါတာက game ကစားတာ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ game ကစားတာဟာ ရေရှည်ရပ်တည်ဖို့အတွက် ဝင်ငွေမရှိပြန်ဘူး။ Game ကစားတာ ဝါသနာ ပါပေမယ့် အလုပ်အတွက် စွန့်လွှတ်ရမှာပဲ။ တကယ်တန်း ဝါသနာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်တစ်ထပ်တည်း ကျဖို့ ဖြစ်ဖို့ တော်တော်ခက်တယ်။ ဒါကြောင့် ဝါသနာ ဆိုတာက အားတဲ့အချိန်မှာ စိတ်အပန်းဖြေဖို့အတွက်သာ အသုံးပြုရတဲ့ အရာဖြစ်သွားတယ်။ အချို့တွေကျပြန်တော့လည်း ဝါသနာနဲ့ အလုပ်နဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျနေတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် လူတိုင်း အဲလို ကံမကောင်းနိုင်ပါဘူး။
နောက်တချက်က အစ်မ ဟန facebook မှာ ရေးထားတဲ့ note လိုမျိုး လက်ရှိ Trend ကို နားလည်ဖို့လိုတယ်။ အလုပ်ရဖို့က လက်ရှိ trend ကို နားလည်မှ အလုပ်ရမယ်။ သူ ဥပမာ ပြသွားတာကတော့ Pure Physics နဲ့ Ph.D ရထားပြီး အလုပ်မရသေးတဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်းအကြောင်းပါ။ Pure Physics က အခုခေတ်မှာ အလုပ်ရဖို့ တော်တော်ခက်သွားပြီ။ တနည်းပြောရင် computer မှာဆိုရင် fortran လိုမျိုး programming language နဲ့ အလုပ်ရဖို့ တော်တော်ခက်သွားပြီပေါ့။ ဒါကြောင့် ခေတ်ကိုလည်း မျက်ခြေမပြတ် ရှိနေဖို့လိုတယ်။ အခုခေတ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ် နောက်ပြီး ကိုယ်လည်း ဝါသနာပါပြီး လေ့လာနိုင်ကာ တကယ်တတ်ကျွမ်းရင်တော့ သေချာတယ် အလုပ်ရမှာ။ သူများတွေက ဒါ အလုပ်ရလွယ်တယ်ဆိုပြီး လေ့လာတော့လည်း ဝါသနာမပါ။ သေသေချာချာလည်း မတတ်ကျွမ်း။ ဒီလိုမျိုး Trends နောက်ကိုလိုက်ပြီး လုပ်နေရင်တော့ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းက ကိုယ့်မှာ မရှိတော့ဘူး။ Trends တွေက အမြဲ ပြောင်းနေတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်း Trends နဲ့ အတူတူ လိုက်ပြောင်းနေတာပဲ။ Trends တွေထဲကမှ ကိုယ်နဲ့ အကိုက်ညီဆုံး အရာကို လေ့လာဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အလုပ်ကို လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
တခြားသူတွေ မေးကြတယ်။ PHP နဲ့ .NET ဘယ်ဟာက အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေးပိုများလဲ။ အဲဒါကို လေ့လာမလို့ပါတဲ့။ အခုအချိန်မှာ PHP ကော .NET နဲ့ပါ စင်္ကာပူမှာ အလုပ်ရနိုင်ပါတယ်။ Singapore က company တွေက အသုံးပြုနေဆဲပဲ။ ဒါကြောင့် ဝါသနာပါတာကို လုပ်လို့ပဲ ဆိုရမယ်။ Trend ကို လေ့လာဆိုတာ ခုနက ကျွန်တော် ပြောခဲ့သလိုမျိုး အခု ခေတ် ဘာ language တွေ အသုံးများနေလဲ။ .NET , Java, PHP , Python, Ruby စတာတွေကို singapore မှာ အသုံးပြုနေတယ်။ ဒါတွေကို သိထားရမယ်။ အခုနောက်ပိုင်း Android , iOS developer တွေ အရမ်းခေါ်နေတယ်။ ပြောင်းလဲနေတဲ့ Trends ကိုလည်း မျက်ခြေပျက်လို့ မရဘူး။ ကိုယ် လုပ်မယ့်အလုပ်ထဲမှာ အခုအချိန် ဘယ် Trend ရောက်နေလဲ။ ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ အရာတွေက အခုခေတ်မှာ သုံးနေသေးလဲ။ ဟိုးအရင်ကတည်းက Vb6သုံးလာတယ်။ အခုထက်ထိ vb6 ကိုပဲ သုံးနေဆဲပဲ။ နောက်ထပ်ပေါ်လာတာတွေကိုလည်း မပြောင်းချင်တော့ဘူး ဆိုရင်တော့ စကာင်္ပူမှာဆိုရင်တော့ အလုပ်ရဖို့ခက်တယ်။ ဝါသနာ ပါတာ ဘာလဲဆိုရင် Computer လို့ လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြေတတ်ကြတယ်။ Computer မှာမှ ဘယ်အပိုင်း ဝါသနာပါလဲ။ ဒါကတော့ နည်းနည်းလေး အသေးစိတ်သွားပြီ။ Computer မှာ Multimedia , Web , Programming , Network စတာတွေထဲက တစ်ခုခု ထဲကမှာ Web ကို ဝါသနာ ပါတယ်ဆိုပါစို့။ Web မှာမှ ဘယ်အပိုင်းလဲ။ Web Development လား Design လား ဆိုပြီး ထပ်ပြီး မေးရပြန်ပြီ။ Web Development ဆိုရင် ဘယ် Language နဲ့ develope လုပ်ရတာကို ကြိုက်လဲ။ ဘယ် langauge နဲ့ ရေးရတာကို ပျော်လဲ။ ဝါသနာပါလဲ ဆိုပြီး ထပ်မေးရအုံးမယ်။ ဝါသနာဆိုက ထပ်ဆုံးက အစ ပဲရှိသေးတယ်။ အဲဒီ အစကနေ အဆင့်ဆင့် ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ ပြီးမှ ကိုယ့် ဝါသနာ အစစ်အမှန်ကို တွေ့နိုင်မှာပါ။ အများအားဖြင့် Computer ဝါသနာ ပါတယ်ဆိုပြီး computer ကို လာတက်။ တကယ် ဝါသနာပါတာက Web Design ။ ကျောင်းမှာသင်တာတွေက Programming။ ဝါသနာက မပါသလို programming ကိုလည်း မစဉ်းစားချင်။ Design နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရောင်တွေ color တွေ concept တွေပဲ သင်ချင်။ အဲလို မျိုးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ဝါသနာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရယ်လို့ ပြောရရင် စကာင်္ပူမှာဆိုရင် Knowledge Engineering နဲ့ ပြီးတဲ့သူတွေအတွက် အလုပ်ရှားပါးသလို Multimedia အတွက်လည်း အလုပ်က ရှားပါတယ်။ သူတို့က Web , Programming , Network စတာတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေး တော်တော်နည်းပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဝါသနာ ပါတဲ့ အလုပ်ကို ရဖို့အတွက် ဝါသနာ မပါတဲ့ အလုပ်မှာ ရတုန်း ခဏ ဝင်လုပ်ပြီး အခွင့်အရေး စောင့်ရတာရှိပါတယ်။ ငါ ဝါသနာ ပါတာပဲ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ခေါင်းမာပြီး နေတော့ အလုပ်တစ်ခု ရဖို့ နှစ်နဲ့ ချီပြီး ကြာသွားပါတယ်။ နှစ်နဲ့ ချီပြီး ကြာသွားတာ အရေးမကြီးပါ။ အရေးကြီးတာက depression ပါ။ ကိုယ်နဲ့ ရွယ်တူတွေ အလုပ်လုပ်နေကြပြီ။ ကိုယ်က အလုပ်မရ။ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေပြီး ဝင်ငွေ မရှိ။ ထွက်ငွေတွေပဲ ဖြစ်ပြီး မိဘ ဆီမှာ လက်ဖြန့်တောင်းရတဲ့ အခါမှာတော့ depression စဝင်ပါတယ်။ အလုပ်မရခင်မှာ depression ဝင်လာပြီး ပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ အဆင်မပြေတာတွေ ပေါ်လာပြီး ကိုယ့်ကိုယ်လည်း အကျိုးမပြု ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ဒုက္ခပေးတဲ့ စိတ်အခြေအနေကို ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ No income, get depression ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိ Trends နဲ့ ပတ်သက်တာကို အလုပ်ရဖို့အတွက် ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ် သည်းခံပြီး လေ့လာတတ်ဖို့ လိုသလို ဝါသနာကိုလည်း ပြောင်းလဲ သင့်ရင် ပြောင်းလဲ လိုက်ရမယ်။ ဝါသနာဆိုတာကလည်း ငယ်စဉ်ကသာ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ ဘဝ တွန်းအား တစ်ခုပါ။ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ဝါသနာ ကို အခြေခံ ပြီး လုပ်တဲ့ သူတွေ ရှိသလို ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်မယ့် အလုပ်ရပြီး လုပ်တဲ့သူတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ။။ လူတစ်ယောက်က basket ball ကစားရတာ ဝါသနာပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အရပ်က အရမ်းပုနေတယ်။ သူ့အနေနဲ့ basket ball ကို professional ကစားဖို့ တော်တော်ခက်လိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ဝါသနာ ပါစေအုံးတော့ သူ့အတွက်က အရမ်းခက်ခဲမှာပဲ။ သူ့ အနေနဲ့ ဝါသနာ မပါပေမယ့် အခြားနေရာမှာ ထူးချွန်တယ်။ အဲဒီ ထူးချွန်မှုကို အသုံးချပြီး ကိုယ့် ဝါသနာ အဖြစ် ပြောင်းလဲသင့်ရင် ပြောင်းလဲ ဖို့လိုပါတယ်။ မပြောင်းလဲနိုင်ဘူး အခွင့်အရေးရအောင် စောင့်မယ်ဆိုရင် ပြဿနာမရှိပါ။ စောင့်နိုင်ပေမယ့် depression မဝင်ဖို့။ ပတ်ဝန်းကျင်က တိုက်ခိုက်တာတွေ ခံနိုင်ဖို့ အတွက် လိုအပ်ပါတယ်။ အလုပ်ဆိုတာ ကိုယ် နဲ့ သင့်တော်တဲ့ အလုပ်မှာ အရင်လုပ်ပြီး ကိုယ့် ဝါသနာ ပါတဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးစောင့်ရတဲ့ အခါတွေ လည်းရှိတတ်ပါတယ်။
အစ်မဟနကတော့ ဝါသနာ အလုပ်ကတော့ အချစ်ဦး နဲ့ တူတတ်ပြီး ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ အလုပ်ကတော့ အိမ်ထောင်ဘက်ကသာ ကိုယ့် ဘဝ တစ်လျှောက်လုံး အေးအေးချမ်းချမ်း ဖြစ်သွားဖို့ ရွေးချယ်ရတာနဲ့ တူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဘဝဆိုတာက တရားမျှတ မှု မရှိဘူးဆိုတာ လူတိုင်း သိပြီး လက်ခံ ပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ လူတိုင်းကတော့ ဝါသနာ ပါတဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်ကြတာပဲ။ သို့ပေမယ့်လည်း ဝါသနာ ပါတဲ့ အလုပ်ဟာ ကိုယ့်ဘဝအတွက် အဆင်ပြေမယ့် အလုပ်မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ သင့်တော်မယ့် အလုပ်ကို ရွေးချယ်ရမှာပဲ လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ အခုတော့ လက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်အတိုင်းဟာ ကျွန်တော့် ဝါသနာ ဖြစ်နေပါပြီ။ ဝါသနာ ပါသည် ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ် လက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာ ပျော်နေဖို့ လက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို ကိုယ့် ဝါသနာအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ အဓိကကျပါတယ်ဗျာ။